Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Nidina tany Tanzania ireo mpizahatany israeliana mbola ho avy
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny mpizahatany israeliana tonga any Tanzania
Nisy mpizahatany israel 150 tonga tany Tanzania tamin'ity herinandro ity mba hanao Safari Safari. Ity vondrona ity dia misy masoivohon'ny fizahan-tany 15 sy mpaka sary fizahantany avy amin'ny tany masina kristianina israel.
Ireo mpandray anjara ao amin'ny fizahantany ao Tanzania dia mijery ity vondrona mpizahatany ity ho toy ny teboka lehibe hamerenana amin'ny laoniny ny indostria nanomboka tamin'ny areti-mandringana.
Tian'ireo mpizaha tany Israel ny mitsidika ireo valan-javaboary rehefa vakansy, mijanona ao Ngorongoro, Tarangire, Serengeti, ary Mt. Kilimanjaro.
Manantena i Tanzania fa hanamarika ny fisokafan'ny fizahan-tany any Afrika io ary mitady tsena loharanom-baovao hafa hanaraka azy, toa an'i Eropa sy Etazonia.
Ireo mpizahatany dia ao anatin'ny mpizahatany manodidina ny 1,000 avy any Israel izay antenaina hitsidika an'i Tanzania amin'ity volana ity. Tanzania dia anisan'ireo firenena afrikana nahasarika mpizaha tany israeliana izay aleon'izy ireo mitsidika ireo valan-javaboary sy ny nosy Zanzibar ao amin'ny Ranomasimbe Indiana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy monja, Israel dia nitifitra tamin'ny laharana fahenina amin'ny tsenan'ny loharanom-pizahan-tany ho an'i Tanzania talohan'ny fipoahan'ny tany. Valan'aretina covid-19.
Andriamatoa Shlomo Carmel, mpanatanteraka sy mpanorina ny Another World Tour Company in Israel, dia nilaza fa hikarakara sidina ho an'ireo mpizahatany israeliana ny orinasany mitsidika an'i Tanzania isan-taona. Tanzania dia eo amin'ny toeran'ireo toerana afrikanina izay nanaovan'ny orinasa marketing mba hisarihana ireo mpizahatany avy any Israel, Eropa, Amerika, ary ireo tsenan'ny fizahan-tany hafa manerantany.
Ny praiminisitra teo aloha Israel, Ehud Barak, dia nitsidika an'i Tanzania taona vitsy lasa izay, nanambara ny fisokafan'ny varavaran'ny fizahan-tany ho an'ireo mpanao fialantsasatra israeliana hafa hitsidika ity toerana safari afrikanina ity.